Domain တစ်ခု၀ယ်ချင်လို့ — MYSTERY ZILLION
Domain name တစ်ခု ကို ၀ယ်ချင်ပါတယ်..(ကျွန်တော်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က xxxx.com နဲ့ ဆိုဒ် တစ်ခုလုပ်ချင်တယ်ဆိုပြီး ၀ယ်ဖို့ရာ..ဘယ်လို ၀ယ်ရလဲ..ဘယ်မှာ၀ယ်ရလဲဆိုပြီး မေးလို့ပါ)..အဲဒါ ဘယ်မှာ ၀ယ်လို့ရပါသလဲ.. အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ..မန္တလေး မြို့ကနေ ၀ယ်လို့ အဆင်ပြေတဲ့နေရာ. ကို သိချင်ပါတယ်.... အွန်လိုင်းက နေ Credit Card တို့ Paypal account တို့နဲ့.ငွေချေပြီးတော့ ၀ယ်မယ်ဆိုရင်တော့.အဆင်မပြေလို့ပါ.. အဲဒီလို ၀ယ်လို့ရတဲ့အကြောင်းကိုတော့ ကိုစေတန် ရေးထားတဲ့.. Post မှာ ဖတ်ပြီးပါပြီ...အပြင်မှာ ပိုက်ဆံ ချေပြီး ၀ယ်လို့ရတဲ့နေရာလေး ကိုသိချင်ပါတယ်.. မန္တလေး မှာ ၀ယ်လို့မရဘူးဆိုရင်တော့ ရန်ကုန်မှာ..၀ယ်လို့ ရမယ့်နေရာလေး..ပေ့ါ..ဗျာ..သိချင်ပါတယ်..:77::77:
ကိုမိုးမြင့်ရှိန်ရောင်းပါတယ်.... တူ့ဆီကအကြွေးဝယ်ဖူးပါတယ်... :d:d:d နောက်တစ်ယောက်က ဂေးလ်ဖင်ကားလေးပါ တူလဲ အဲ့လိုင်းထဲဝင်လာပီလို့ပြောပါတယ်....:d:d:d
E Trade ကနေ ၀ယ်လို့ရပါတယ်
လိပ်စာက ၃၁ လမ်း၊ ၇၇ လမ်း နဲ့ ၇၈ လမ်းကြားပါ CityFM နားလေးမှာပါ
၁ နှစ်စာ စျေးနှုန်းက ၁၆၅၀၀ ပါ။
ဟိုတနေ့ကဘဲ ကျွန်တော်လည်း ၀ယ်လို့ သိရတာပါ
Domain name တစ်ခု ကို ၀ယ်ချင်ပါတယ်..(ကျွန်တော်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က xxxx.com နဲ့ ဆိုဒ် တစ်ခုလုပ်ချင်တယ်ဆိုပြီး ၀ယ်ဖို့ရာ..ဘယ်လို ၀ယ်ရလဲ..ဘယ်မှာ၀ယ်ရလဲဆိုပြီး မေးလို့ပါ)..အဲဒါ ဘယ်မှာ ၀ယ်လို့ရပါသလဲ.. အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ..မန္တလေး မြို့ကနေ ၀ယ်လို့ အဆင်ပြေတဲ့နေရာ. ကို သိချင်ပါတယ်.... အပြင်မှာ ပိုက်ဆံ ချေပြီး ၀ယ်လို့ရတဲ့နေရာလေး ကိုသိချင်ပါတယ်.. မန္တလေး မှာ ၀ယ်လို့မရဘူးဆိုရင်တော့ ရန်ကုန်မှာ..၀ယ်လို့ ရမယ့်နေရာလေး..ပေ့ါ..ဗျာ..သိချင်ပါတယ်..:77::77:
ဒါဆိုရင် တော့...အမြန်သာ ဆက်သွယ်လိုက်တော့နော်...WWW Media Company Ltd. Phone-204020/ 245230 (01)ရန်ကုန်ကပါ။
သူတို့ကတော့ အကုန်စီစဉ်ပေးပါတယ်။ ကျွန်တော် တို့လည်း သူတို့ company နဲ့လုပ်တာပါ။
http://www.startradermm.com/ ဒါလေးကတော့ ကြော်ငြာ၀င်တာပါ :D:D
DOMAIN    Myanmar Kyat par Year
.com =>   11,500
.net   =>   11,500
.org   =>   11,500
.info   =>   6,500
.co.uk =>   7,500
topboy service ( 501112 ) ask for domain name
သူလဲရောင်းပါတယ်တဲ့ MZ ကမိုးနတ်သားလေးပါ နာမည်က ဝေယံတဲ့.
တစ်နှစ်ကို 15$ ပါတဲ့ life time ဆိုဒီကောင့်ရှိတယ်ဆိုပဲ.... စိတ်ဝင်စားရင် ဝင်ကြည့်လိုက်နော်..
အခုလို ပြန်လည်ဖြေ ကြား ပေးကြသော အမ်ဇက်မှ သူငယ်ချင်းများအားလုံးကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ....ကျွန်တော်တို့က မန္တလေး က ဆိုတော့ မန္တလေး နဲ့ အဆင် ပြေမယ့် E trade ကို ပဲ စုံစမ်း ပြီး ၀ယ်ခိုင်း..လိုက်ပါ့မယ်..ခင်ဗျ... တခြား လမ်းညွှန်ပေးကြတဲ့ အကိုတို့ကိုလည်း ကျေးဇူး ထပ်ပြီးထင်တယ်နော်... နောက်..တခြားလူတွေက မေးရင်လမ်းညွှန်လိုက်ပါ့မယ်........
ဒါဆို ကျွန်တော် ၅၀၀၀ အတင်ခံလိုက်ရတာပေါ့
ဆိုးပါ့ဗျား။ ဒါနဲ့ဆို ကျွန်တော် ၀ယ်တာ ၂ ခုရှိပြီဗျား
ဟုတ်တယ်ဗျ..စျေးက ၅၀၀၀ ကြီးများတောင် ကွာနေတာနော်.. ကျွန်တော်လည်း ၀ယ်ဖြစ်ရင်တော့.. ရန်ကုန်က စျေးနှုနး်ကို ပြောပြရအုံးမယ်..:):d
ကျွန်တော် info တစ်ခု ဝယ်တာ
နှစ်နှစ်စာကို ၅၀၀၀ ကျော်ပဲ ကျတယ်ခင်ဗျ
တိုက်ရိုက် ဝယ်လိုက်တာ။ ။
တိုက်ရိုက်၀ယ်ရင်တော့ စျေးပိုသက်သာမယ်ထင်တယ်။ တဆင့်ရောင်းတဲ့ သူတွေကလည်း သူတို့ ၀ယ်တဲ့ hosting ပေါ်လိုက်ပြီး စျေးတသက်မှတ်ထည်း ရှိမှာ မဟုတ်ဘူးဗျ။ များများသိထားတော့ ကိုယ်သုံးမယ့် စျေးနဲ့ လိုချင်တဲ့ domain အမျိုးအစားနဲ့ ချိန်ပြီး ၀ယ်လို့ ရတာပေါ့။